XOG: Mucaaradka oo hubka waa weyn ku xirtay guryahooda si isaga difacaan weerar laga cabsi qabo | Allbanaadir
Home Wararka Maanta XOG: Mucaaradka oo hubka waa weyn ku xirtay guryahooda si isaga difacaan...
XOG: Mucaaradka oo hubka waa weyn ku xirtay guryahooda si isaga difacaan weerar laga cabsi qabo
Sida shabakada wararka Allbanaadir Media u xaqiijiyeen qoysas degan xaafadaha Buula-xuubeey iyo agagaarka garoonka diyaaradaha ayaa shegaayo in kooxaha mucaaradka halkaas ka wadaan dhaq dhaqaaqyo ciidan.
Dabaqyadda ku yaalla xaafadda Buulla xuubey iyo aagga garoonka diyaaradaha ee Muqdisho Ciidanka Musharaxiinta ayaa la saaran qoryaha (Hubka culus) sida P9 iyo RBG.
Musharaxiinta ayaa doonaya iney iska caabin ka sameeyaan Ciidan katirsan kuwa dowadda oo la sheegay in lagu diyaariyey xeryaha Ciidanka ee kala ah damaanyo iyo General Gordan, si ay u weeraraan xaafadaha ay dagan yihiin Musharraxiinta.
Ciidanka Midowga Musharaxiinta ayaa sidoo kale isku ballaariyey xaafadda Buula Xuubey ee Muqdisho, waxaana ujeedadu tahay is difaacid maadaama Xamar dhexdeeda la isku hub aruursanayo oo dowladduna rabto in Musharaxiinta la weeraro.
Isku soo wada duub magaalada Muqdisho ayaa laga daremayaa kacsanaan dhanka siyaasada kasoo wadaan musharixiinta mucaaradka iyo dowlada soomaaliya kasoo kadhashay doorashada.